DHAGEYSO: Wasiir Kaahin ‘‘Somaliland madax kama noqon doona qof baasaboor Ajnabi ah wata‘‘ ! +XOG XASAASI | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: Wasiir Kaahin ‘‘Somaliland madax kama noqon doona qof baasaboor Ajnabi ah...
DHAGEYSO: Wasiir Kaahin ‘‘Somaliland madax kama noqon doona qof baasaboor Ajnabi ah wata‘‘ ! +XOG XASAASI
Wasiir Maxamed Axmed Kaahin
Berbera (Halqaran.com) – Wasiirro ka tirsan xukuumadda Somaliland oo Warbaahinta kula hadlay Magaalada Berbera ee ayaa waxa ay sheegeen in dastuurka Somaliland wax ka badal lagu sameyn doono.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland Maxamed Axmed Kaahin ayaa sheegay in qorshaha wax ka badalka dastuurka lagu soo dari doono qodob mamnuucaya dadka wata Baasaboorka Ajnabiga ah in ay Somaliland madax ka noqdaan.
Wuxuu kaloo sheegay wasiirku in dhibaatooyinka Somaliland ay qeyb ka yihiin dadka ka yimaada dalka dibadiisa ee baasabarada Ajaniga ah wata.
Mas’uuliyiinta Somaliland gaar ahaan kuwa xisbiga Waddani ayaa maalmihii ugu dambeeyay waday Ololo wax looga badalaayo dastuurka si loo qanciyo qaar ka mid ah beelaha degaanada Somaliland.
qof baasaboor Ajnabi ah wata
Somaliland madax kama noqon doona